News @ M-Media - Page 2866 of 3310 -
သမ္မတဦးသိန်းစိန် ဗြိတိန်အောက်လွှတ်တော်ဥက္ကဌအား လက်ခံတွေ့ဆုံ
M-Media နေပြည်တော် ဇူလိုင် ၃ဝ၊၂၀၁၃ နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်သည် ဗြိတိန်နိုင်ငံ အောက်လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ H.E. Mr. John Bercow ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား ယမန်နေ့ ညနေ ၃ နာရီက နေပြည်တော်ရှိ[Read More…]
July 31, 2013 — မြန်မာသတင်း
ဗုဒ္ဓဂါယာ ပေါက်ကွဲမှု့ နှင့် ပတ်သက်၍ ကျောင်းဆောင် ထိန်းသိမ်းရေး အတွင်းရေးမှူးဟောင်းများကို စစ်ဆေးမည်
ဇူလိုင်-၃၁-၂၀၁၃ M-Media Ref: India Times ဘုရား ကျောင်းဆောင် ထိန်းသိမ်းရေး ဌာနမှ အတွင်းရေးမှုးဟောင်းများအား ဗုဒ္ဓဂါယာအတွင်း ပေါက်ကွဲမှုဖြင့် ပတ်သက်၍ NIA မှ စုံစမ်းမည် GAYA: ဗုဒ္ဓဂါယာတွင် ဆက်တိုက်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည့် ပေါက်ကွဲမှု၏[Read More…]
July 31, 2013 — နိုင်ငံတကာသတင်း
၃၀-၇-၂၀၁၃ နိုင်ငံတကာ သတင်းအကျဉ်း စုစည်းမှု
ဇူလိုင်-၃၀၊၂၀၁၃ M-Media အမေရိကန်၏ အကြီးမားဆုံး ကလေးလိင်ကုန်ကူးမှုတိုက်ဖျက်ရေး ဤသုံးရက်ကြာ စစ်ဆင်ရေးကို မြို့ပေါင်း ၇၆မြို့တွင် တစ်ပြိုင်တည်း ပြုလုပ်ခဲ့ရာ ကလေးငယ် ၁၀၅ဦးကို ကယ်တင်နိုင်ခဲ့ပြီး တရားခံ ၁၅၀ဦး ဖမ်းမိ၍ $165,000. တန်ဖိုးရှိ ပစ္စည်းများ[Read More…]
July 30, 2013 — နိုင်ငံတကာသတင်း
ရိုးရိုးကြီးမတွေးဘဲ ဖောက်ထွက်တွေးရင် ဒါကို ဘယ်လိုမြင်သလဲ (သူ့အတွေး သူ့အမြင် )
ဇူလိုင် ၃၁၊ ၂၀၁၃ ရေးသူ- ရောဘတ်အယ်လ်ဟို့စ် ဦးဝီရသူ နှင့် ဦးအောင်သောင်းတို့ တွေ့ဆုံခဲ့သည့် ဗီဒီယိုကလစ် http://youtu.be/llxLP9v-ZVo ဒီဗီဒီယို ကလစ်ပ် က ဦးဝီရသူ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ် စာမျက်နှာမှာ မနေ့က အသစ်တင်ထားလိုက်တဲ့ ဟာပါ။[Read More…]
July 30, 2013 — သူ့အမြင်
Previous 1 … 2,864 2,865 2,866 2,867 2,868 … 3,308 Next